Tisati taenderera, ndapota verenga Chibvumirano ichi nekuti kuwana, kubhurawuza, kana neimwe nzira kushandisa Saiti kunoratidza chibvumirano chako kune ese Mitemo neMamiriro akataurwa.
1. KUKWANA UYE KUPEDZERA KWERUZIVO
FISHISHERE haina mhosva kana ruzivo rwakawanikwa paSiti ino rusina chokwadi, yakakwana kana yazvino. Izvo zviri paSiti ino zvinopihwa ruzivo rwese chete uye hazvifanirwe kuvimbwa nazvo kana kushandiswa seyo chete hwaro hwekuita sarudzo pasina kubvunza chekutanga., zvakanyatsojeka, mamwe akazara kana akawanda ane nguva manyuko eruzivo.
Isu tinochengeta kodzero yekushandura zvirimo zveSiti iyi chero nguva, asi isu hatina chisungo chekuvandudza chero ruzivo paSiti. Unobvuma kuti ibasa rako kutarisa shanduko kuSaiti. Zvimwe zvinhu zvinogona kutaridzika zvakati kurei kana zvidiki pane saizi chaiyo nekuda kwekutadza kwescreen uye mafoto maitiro. Zvimwe zvinhu zvinogona kumiririrwa muhukuru kupfuura saizi chaiyo kuti zvinyatso kuratidza, kana kuti idiki pane saizi chaiyo kuitira kuratidza chinhu chose.
2. YECHITATU ZVIRI MUKATI
Zvimwe zvezviri mukati, maficha uye mashandiro ari paSiti ino anogona kunge ari ake uye anoshandiswa nevechitatu mapato - Wechitatu Bato Vanopa. Kushandisa kwako uye kudyidzana nezvinhu zvakadaro, maficha uye mashandiro kana Wechitatu Bato Zvemukati zvinogona kuve zviri pasi peMitemo neMamiriro akasiyana.
Muchiitiko ichocho, unobvuma kuti aya Mitemo Yekushandisa haashande pakushandisa kwako Kwechitatu Bato Zvemukati uye kuti iwe uchave uri pasi uye kutevedzera zviga zvekushandiswa zvinopihwa neVatatu Vebato Vanopa..
UNOZVIBVUMA KUTI HATINA BASA KANA KUTI ZVIMWE MHOSVA YECHITATU CHIRI CHECHITATU KANA ZVINHU KANA KUSIYWA KWEVANHU CHECHITATU VANOPA UYE KUTI CHECHIPIRI KANA ZVIMWE ZVINHU ZVINHU ZVINHU ZVINOWANIKWA KWAURI PAMWE CHECHITATU CHICHAVA NECHINHU CHECHITATU. PROVIDER(S) UYE KWETE ISU.
3. KUSHANDISA ZVINHU PASATI
Zvese zvirimo pane ino saiti (kusanganisira, pasina muganhu, text, design, mifananidzo, logos, icons, mifananidzo), ndiyo yakasarudzika pfuma uye ndeye FISHISHERE, vanopa marezinesi kana vanopa zvemukati uye inodzivirirwa nekodzero, trademark nemimwe mitemo inoshanda.
FISHISHERE, kana vanopa marezinesi kana vanopa zvemukati, chengetedza zita rakazara uye rakazara kune izvo zvakapihwa paSiti, kusanganisira kodzero dzose dzine chekuita nepfuma, uye nekukupa zvinhu izvi pasi perezinesi rinodzoserwa chero nguva mukufunga kwekambani. FISHISHERE haibvumidze kana kumiririra kuti kushandisa kwako zvinhu paSiti iyi hakuzotyore kodzero dzevechitatu mapato asina hukama neFISHISHERE..
4. KUITA PASAiti
Isu tinopa masevhisi kuchinyorwa chako kune zviziviso, mazwi, uye mamiriro akaiswa muchibvumirano ichi. Besides, uchachengeta mitemo, nhungamiro, policy, mazwi, uye mamiriro anoshanda kune akadaro masevhisi usati waashandisa.
Nekunyoresa uye nekufunga nezve mashandisiro ako eSaiti unobvuma kupa chokwadi, yakarurama, ruzivo rwazvino uye rwakakwana pamusoro pako.
Kunyoreswa, zvinodikanwa kushandisa password. Iwe une basa rekuchengetedza password yako. Unobvuma kuti uchave nemhosva kune chero uye zvese zvirevo zvakaitwa, uye zviito kana kusiiwa kunoitika, kuburikidza nekushandisa password yako. Kana iwe uine chero chikonzero chekutenda kana kuziva chero kurasikirwa, kuba kana kushandisa zvisina mvumo password yako, zivisa FISHISHERE nekukasira.
Unogona kuwana, kopi, dhawunirodha uye prinda izvo zviri paSaiti kuti uzvishandise wega uye zvisiri zvekutengesa, chero ukasagadzirisa kana kudzima chero kodzero, trademark kana chimwe chiziviso chemuridzi chinowanikwa pane izvo zvaunowana, kopi, download kana prinda. Chero kumwe kushandiswa kwezvinhu paSaiti, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa pakugadziridzwa, kugovera, kutapurirana, performance, broadcast, bhuku, uploading, rezinesi, reverse engineering, kutamisa kana kutengesa kwe, kana kusikwa kwemabasa anotorwa kubva, chero chinhu, ruzivo, software, zvigadzirwa kana masevhisi akawanikwa kubva kuSiti, kana kushandiswa kweSaiti nekuda kwemakwikwi kune FISHISHERE, zvinorambidzwa zviri pachena.
Haufanire kuisa, govera, kana neimwe nzira kushambadza kuburikidza ino Saiti chero Content, ruzivo, kana zvimwe zvinhu izvo (a) inosanganisira chero tsikidzi, mavhairasi, honye, musungo magonhi, Trojan horses, kana imwe kodhi inokuvadza kana zvivakwa; (b) ari libelous, kutyisidzira, defamatory, zvinonyadzisa, zvisina kunaka, zvinonyadzisira, kusarura, kana kuti inogona kupa mukana kune chero mhosva yehurumende kana yemhosva pasi pemitemo yeU.S. kana mitemo yeimwe nyika ipi zvayo inogona kushanda; kana (c)anotyora kana kukanganisa kodzero dzekodzero, patents, trademarks, service marks, kutengeserana zvakavanzika, kana mamwe kodzero dzemuridzi chero upi zvake.
Nekugamuchira aya Mitemo Yekushandisa kuburikidza nekushandisa kwako Saiti, unoratidza kuti ndiwe 18 makore ezera kana kupfuura. Kana uri pasi 18 makore ezera ndapota shandisa ino Saiti chete pasi pekutariswa kwemubereki kana muchengeti wepamutemo. Zvichienderana nemitemo nemamiriro echibvumirano ichi, izvi zvinokupa iwe zvishoma, revocable, isingachinjike, uye isiri-yega rezinesi rekuwana uye kushandisa iyo Saiti nekuiratidza paInternet browser chete nechinangwa chekutenga uye kwete chekutengesa chero kushandiswa kana kushandiswa pachinzvimbo chechero bato rechitatu., kunze kwekunge kwabvumirwa zviri pachena neFISHISHERE pachine nguva. Chero kutyorwa kweChibvumirano ichi kuchaguma nekukanzurwa kwerezinesi rakapihwa mundima ino pasina chiziviso kwauri..
FISHISHERE inochengetedza kodzero yekuramba kana kudzima kunyoreswa kwemunhu kune ino Saiti, bvisa chero munhu kubva paSiti ino kana kurambidza chero munhu kushandisa iyi Saiti chero chikonzero.
5. KUCHINJWA KWEMITEMO IYI YEKUSHANDISWA
Isu tinochengetera kodzero yekushandura ino saiti uye aya Mitemo neMamiriro chero nguva.
FISHISHERE inochengetedza kodzero, pakufunga kwayo chete, kuchinja, modify, wedzera kana kubvisa chero chikamu cheMitemo Yekushandisa iyi, yose kana kuti muchidimbu, chero nguva, nekutumira mazwi akadzokororwa paSiti. Ibasa rako kutarisa nguva nenguva pane chero shanduko dzatinoita kuMitemo Yekushandisa. Kuenderera kwako kushandisa Saiti mushure mekuchinja kupi kuMitemo Yekushandisa kana mamwe marongero zvinoreva kuti unobvuma shanduko.
8400 NW. 25th Mugwagwa, Suite 100, BM # 15-01837, Doral, FL 33198-1534, nyika dzakabatana
Kambi & Kukwira makomo
0 items Ngoro